A na-echekwa ọdịnala Malta n'oge na njikere iji nwee ọjoụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » A na-echekwa ọdịnala Malta n'oge na njikere iji nwee ọjoụ
omenala • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Luzzu na obodo azu nke Marsaxlokk na Malta
Odude ke ufọt Mediterranean, Malta, e nwere mgbe niile ọgaranya na omenala obodo nka. Ọrụ a bara ezigbo uru na ọdịbendị obodo nke Agwaetiti Maltese. Crafọdụ nka, dịka ime akwa na nkata, adịla na Malta kemgbe ọtụtụ puku afọ.
Chọọchị na-agbakarị ịkpa ákwà, ịkwa akwa na ịkpa akwa. Ndụ na Gozo, otu n'ime agwaetiti nwanne nwanyị Malta, na ọtụtụ n'ime ime obodo Malta bụ ihe siri ike na ọrụ ọrụ aka ghọrọ isi ihe na-akpata ego maka ezinụlọ ndị bi n'ime ime obodo. Ọrụ aka nke mepụtara n'okpuru Knights bụ ọla edo na ọlaọcha. Ngwaahịa kachasị ọnụ ahịa nke Malta bụ ihe eji achọ mma na ọla. Taa, ndị na-akpụ ọla edo na Malta na-eme nke ọma, na-ebupụkarị ọrụ ha n’obodo ndị mepere emepe na mba ọzọ.
Akụkọ banyere Ime Mkpịsị
Laa azụ na narị afọ nke 16, e mepụtara eriri ohiri isi n'obodo Genoa, Italytali. Na 1640, Order nke St. John webatara lace na Malta. Achọrọ mmụba dị ukwuu na ndị na-eme lace n'ihi nnukwu ọchịchọ ndị Knights, ndị ụkọchukwu na ndị otu Maltese aristocracy chọrọ. Ọ gara n'ihu na-aga n'ihu ruo na njedebe nke narị afọ 18, mgbe Napoleon Bonaparte meriri agwaetiti Maltese. N’oge a, ọ fọrọ nke nta ka mkpịsị mkpịsị anwụ. Ma ekele dịrị Lady Hamilton Chichester, bụ onye nwere mmasị na eriri Malta, weghachite ịme lace. N'ime narị afọ nke iri na itoolu, otu onye ụkọchukwu nyere nwanyị Gozitan otu eriri sitere na Genoa, ọ mụtara ụkpụrụ lace ahụ ma mee ike ya niile i copyomi ya. Ọ kuziri onwe ya, ụmụnne ya ndị nwanyị na ndị enyi ka amụọ nka nke ịkpa akwa na Gozo. Ọ ghọrọ onye ama ama n'etiti ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị Gozitan, yana ndị ụkọchukwu. Ejiri eriri nke ha mere mee ka uwe na uwe chọọchị mara mma. N'oge Nnukwu Ihe Ngosi na London na 19, e gosipụtara ihe izizi lace nke Malta. Na mmemme a, Prince Albert gosipụtara ọtụtụ ọdịmma nka na sayensị sitere n'akụkụ ụwa niile.
Ebe ọ bụ na ebupụtara lace Malta gafee Europe, ruo India na China, ndị nne, ụmụ nwanyị na ndị ọzọ niile nọ n'ezinụlọ, gụnyere ụmụ nwoke, lace a rụpụtara n'ọtụtụ na ọrụ maka ụlọ ọrụ mpaghara na nke ndị mba ọzọ.
Mkpụrụ osisi Maltese, ma ọ bụ "il-bizzilla," bụ otu n'ime ọdịnala kacha ochie na nke a kacha akwanyere ùgwù na Malta. Ọ bụ ezie na a na-eme ya na silk Spanish, ihe atụ Maltese obe agbakwunyere na lace ụkpụrụ bụ ihe na-eme ya pụrụ iche. Mkpịsị ụkwụ Maltese bụ aha usoro na-aga n'ihu nke a na-akpọ "bobbin lace" ma ọ bụ "na-eme lace bobbin," nke na-ezo aka etu esi eme akwa eriri nke Malta site na iji bobbins, nke bụ obere "mkpisi" osisi nke ejiri osisi osisi. Ndị ọbịa ekwesịghị ịhapụ ịnwe ohere ịhụ ndị lacemakers mpaghara a mgbe ha na-agagharị n'okporo ámá Gozo ma ọ bụ gaa Obodo 'Qali Crafts Village, nke ghọworo ebe ndị njem nleta dị mkpa.
A na-ere ahịa ọla edo na ahịa Artisan
Akụkọ banyere Filigree
Ọrụ aka nke mepụtara n'okpuru Knights bụ ọla edo na ọlaọcha. Ngwaahịa kachasị ọnụ ahịa nke Malta bụ ihe eji achọ mma na ọla. Filigree bụ ihe ịchọ mma dị nro nke ejiri eriri ọla edo ma ọ bụ ọla ọcha wee mepụta ya wee mepụta ya. Nkap nke ihe nchoputa bu ihe ndi ozo laghachiri Egypt oge ochie na ndi Finishia gbasara usoro a rue Malta na Mediterenian nile.
Nzuko na Malta
Ndị omenkà mpaghara Maltese emeela filigree nke ha site n'iji obe nwere akara aka asatọ, ihe ama ama ama dị na ọdịiche dị iche iche, nke bara nnukwu uru, ọla edo ma ọ bụ ọla ọcha, yana mgbaaka, mgbaaka, na ọla ntị. Ọtụtụ ụlọ ahịa ndị mara mma gburugburu Malta na Gozo na-ere ihe ntanetị, mana ịnwe ọrụ ahụ emere ozugbo na enwere usoro ịchọrọ iji lelee. Ndị ọbịa ekwesịghị ileta ileta ndị ọbịa Obodo 'Qali Crafts Village, maka ohere ịzụta otu ihe nketa nke Malta.
Ndị ọkụ azụ̀ ka na-eji ọmarịcha ụgbọ mmiri ndị Malta a na-akpọ "Luzzu." Na nke ọ bụla Ibuchukwu enwere anya anya dị n’elu ụgbọ mmiri ahụ. E kweere na anya ndị a bụ ọdịnala oge ochie nke ọdịnala Finishia ochie ma bụrụ nke a na-akpọkarị Anya Osiris, chi ndị Finishia na-echebe ihe ọjọọ.
Obodo mara mma nke na-egbu azu nke Marsaxlokk bu onye ama ama n'ọdụ ụgbọ mmiri ya Luzzu's, nnukwu ụlọ oriri na ọafụ seụ na-ere mmiri, na maka Azụ Azụ Sunday na Souvenir. Luzzu dịkwa maka ịkpọrọ ndị ọbịa ịmatakwu banyere ụsọ mmiri nke akụkọ ihe mere eme nke Malta yana ịga ịkụ azụ n'oké osimiri
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, nke dị n’etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi dị oke ịtụnanya nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta wuru ndị Knights dị mpako nke St John bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnuche Malta na okwute sitere na ụlọ ọrụ okike kacha ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla n'ụwa, rue otu n'ime Alaeze Britain kachasị egwu. usoro nchebe, ma gunyere ngwakọta nke ụlọ, okpukpe, na ụlọ agha site n'oge ochie, ochie, na oge oge a. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma, na afọ 7,000 nke akụkọ ihe mere eme na-akpali akpali, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa na www.visitmalta.com.